Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 9:1-62
9 Akabva aunganidza vane Gumi Nevaviri, akavapa simba nechiremera zvekudzinga madhimoni ese+ nekurapa zvirwere.+ 2 Uye akavatuma kunoparidza nezveUmambo hwaMwari nekuporesa, 3 akati kwavari: “Musatakura chinhu parwendo rwacho, ungava mudonzvo kana homwe yezvekudya, kana chingwa kana mari;* uye musava nenguo mbiri.*+ 4 Asi kwese kwamunopinda mumba, garai imomo kusvikira mabva munzvimbo iyoyo.+ 5 Uye kwese kwamusingagamuchirwi nevanhu, pamunobuda muguta iroro, zunzai guruva riri patsoka dzenyu kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 6 Vachibva ipapo vakapinda musha mumwe nemumwe munharaunda yacho yese vachizivisa mashoko akanaka nekurapa vanorwara.+ 7 Herodhi* mutongi weruwa akanzwa zvese zvaiitika, uye akavhiringidzika chaizvo nekuti vamwe vanhu vaiti Johani akanga amutswa kuvakafa,+ 8 vamwe vachiti Eriya akanga aonekwa, vamwewo vachiti mumwe wevaprofita vekare akanga amuka.+ 9 Herodhi akati: “Johani ndakamudimbura musoro.+ Ko uyu wandiri kunzwa kuti ari kuita zvinhu zvakadaro ndiani?” Saka aida chaizvo kumuona.+ 10 Vaapostora pavakadzoka, vakaudza Jesu zvese zvavakanga vaita.+ Akabva avatora akaenda navo kwavo vega muguta rinonzi Bhetisaidha.+ 11 Asi vanhu pavakazviziva, vakamutevera. Uye akavagamuchira zvakanaka, akatanga kuvaudza nezveUmambo hwaMwari, uye akaporesa vaya vairwara.+ 12 Zuva rakanga rava kunyura. Vane Gumi Nevaviri vakauya, vakati kwaari: “Chiregai vanhu vaende mumisha nemumaruwa akapoteredza, vanotsvaga pekurara nezvekudya, nekuti tiri kure nekunogara vanhu.”+ 13 Asi iye akati kwavari: “Vapei zvekudya imimi.”+ Ivo vakati: “Tinongova nezvingwa zvishanu nehove mbiri chete, kunze kwekunge tichitofanira kuenda tonotengera vanhu vese ava zvekudya.” 14 Paiva nevarume vaigona kutosvika 5 000. Asi akati kuvadzidzi vake: “Itai kuti vagare vari mapoka, boka rimwe nerimwe riine vanhu vangasvika 50.” 15 Vakaita saizvozvo, vakaita kuti vese vagare pasi. 16 Akatora zvingwa zvacho zvishanu nehove dzacho mbiri, akatarisa kudenga, ndokuzvikomborera. Akabva azvimedura, akatanga kuzvipa vadzidzi kuti vape vanhu. 17 Saka vese vakadya vakaguta, uye vakaunganidza zvakanga zvasara, zvikaita tswanda 12.+ 18 Rimwe zuva paakanga achinyengetera ari ega, vadzidzi vakauya kwaari, akavabvunza kuti: “Vanhu vari kuti ndini ani?”+ 19 Vakapindura vachiti: “Johani Mubhabhatidzi, asi vamwe vanoti Eriya, vamwewo vachiti mumwe wevaprofita vekare akamuka.”+ 20 Akabva ati kwavari: “Ko imi, munoti ndini ani?” Petro akapindura achiti: “Kristu waMwari.”+ 21 Akabva avaudza kuti vasatombozviudza kana ani zvake,+ 22 asi akati: “Mwanakomana wemunhu anofanira kusangana nematambudziko akawanda, orambwa nevakuru nevatungamiriri vevapristi nevanyori, ourayiwa,+ ozomutswa pazuva rechitatu.”+ 23 Akabva atizve kwavari vese: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe,+ atore danda rake rekutambudzirwa,* aritakure zuva nezuva, arambe achinditevera.+ 24 Nekuti munhu wese anoda kuponesa upenyu hwake* acharasikirwa nahwo, asi munhu wese anorasikirwa neupenyu hwake* nekuda kwangu ndiye achahuponesa.+ 25 Ko zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yese asi orasikirwa neupenyu hwake kana kuti oparara?+ 26 Nekuti munhu wese anonyara neni nemashoko angu, Mwanakomana wemunhu achanyarawo naye paanouya ari mukubwinya kwake nekwaBaba nekwengirozi tsvene.+ 27 Asi chokwadi ndinokuudzai kuti pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu vasati vaona Umambo hwaMwari.”+ 28 Anenge mazuva 8 pashure pekunge ataura mashoko aya, akatora Petro naJohani naJakobho, akakwira navo mugomo kunonyengetera.+ 29 Paakanga achinyengetera, chiso chake chakachinja, zvipfeko zvake zvikava zvichena zvichipenya. 30 Uye pakabva paonekwa varume vaviri vachikurukura naye; vaiva Mozisi naEriya. 31 Ava vakaonekwa vachibwinya, vakatanga kutaura nezvekuenda kwake, kwaainge ava kuda kuzadzisa kuJerusarema.+ 32 Petro nevaya vaaiva navo vakanga vakundwa nehope, asi pavakazonyatsosvinura vakaona kubwinya kwake+ uye varume vacho vaviri vakanga vakamira naye. 33 Ava pavakanga vava kubva paaiva, Petro akati kuna Jesu: “Murayiridzi, zvakanaka kuti tiri pano. Saka regai tidzike matende matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, uye rimwe raEriya.” Akanga asingazivi zvaaitaura. 34 Asi paaitaura kudaro, gore rakavapo, rikavakwidibira. Pavaifukidzwa negore racho, vakatanga kutya. 35 Inzwi+ rakabva rabuda mugore, richiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, akasarudzwa.+ Muteererei.”+ 36 Painzwika inzwi iroro, Jesu akaonekwa ava ega. Asi vakaramba vakanyarara uye hapana wavakaudza zvavakaona mumazuva iwayo.+ 37 Mangwana acho pavakaburuka mugomo, akasangana nevanhu vakawanda.+ 38 Uye mumwe murume akabva ashevedzera ari pakati pevanhu, achiti: “Mudzidzisi, ndinokumbirawo kuti mumboonawo mwanakomana wangu, nekuti ndiye ega wandiinaye.+ 39 Anoti kana abatwa nemweya, anotanga kuridza mhere, achigwinha-gwinha achipupa furo, uye unozobuda maari wamukuvadza patoita basa chairo. 40 Ndakumbira vadzidzi venyu kuti vaudzinge, asi vatadza.” 41 Jesu akapindura achiti: “Imi chizvarwa chisina kutenda, chakamonyana,+ ndinofanira kuramba ndiinemi uye ndichikuitirai mwoyo murefu kusvikira riini? Uya nemwanakomana wako pano.”+ 42 Asi kunyange paakanga ava kusvika, dhimoni racho rakamurovera pasi, rikaita kuti agwinhe-gwinhe zvine simba. Asi Jesu akatuka mweya wacho usina kuchena, akaporesa mukomana wacho, akamudzorera kuna baba vake. 43 Uye vese vakashamiswa nesimba guru raMwari. Pavakanga vachiri kushamiswa nezvinhu zvese zvaakanga achiita, akati kuvadzidzi vake: 44 “Nyatsoteererai muyeuke mashoko aya, nekuti Mwanakomana wemunhu achatengeswa mumaoko evanhu.”+ 45 Asi havana kunzwisisa zvaaitaura. Zvakanga zvakatovanzwa kwavari kuti vatadze kuzvibata, uye vaitya kumubvunza nezvazvo. 46 Vakabva vatanga kuitisana nharo dzekuti ndiani aiva mukuru pakati pavo.+ 47 Jesu akaziva zvavaifunga, akabva atora mwana mudiki, akamumisa parutivi pake, 48 akati kwavari: “Munhu wese anogamuchira mwana mudiki uyu nekuda kwezita rangu anondigamuchirawo; uye munhu wese anondigamuchira anogamuchirawo iye akandituma.+ Nekuti munhu anozviita mudiki pakati penyu mese ndiye mukuru.”+ 49 Johani akabva ati: “Murayiridzi, taona mumwe munhu achidzinga madhimoni achishandisa zita renyu, uye taedza kumurambidza, nekuti haasi kukuteverai pamwe chete nesu.”+ 50 Asi Jesu akati kwaari: “Musaedza kumurambidza, nekuti wese asingapesani nemi ari kurutivi rwenyu.” 51 Paiswedera mazuva ekuti akwidzwe,+ chido chake chakasimba chakanga chava chekuenda kuJerusarema. 52 Saka akatuma nhume kuti dzifanotungamira. Uye dzakaenda, dzikapinda mune mumwe musha wevaSamariya, kuti dzifanomugadzirira. 53 Asi havana kumugamuchira,+ nekuti akanga akananga kuJerusarema. 54 Vadzidzi vake Jakobho naJohani+ pavakaona izvi, vakati: “Ishe, munoda here kuti tishevedze moto ubve kudenga uvaparadze?”+ 55 Asi akatendeuka, akavatsiura. 56 Saka vakaenda kune mumwewo musha. 57 Pavakanga vachifamba mumugwagwa, mumwe munhu akati kwaari: “Ndichakuteverai kwese kwamunoenda.” 58 Asi Jesu akati kwaari: “Makava ane mwena yaanogara uye shiri dzekudenga dzine matendere, asi Mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro wake.”+ 59 Akabva ati kune mumwe: “Iva muteveri wangu.” Murume wacho akati: “Ishe, ndibvumirei kuti nditange ndaenda kunoviga baba vangu.”+ 60 Asi akati kwaari: “Rega vakafa+ vavige vakafa vavo, asi iwe enda unozivisa Umambo hwaMwari kwese kwese.”+ 61 Uyezve mumwe akati: “Ndichakuteverai Ishe, asi ndibvumirei kuti nditange ndanooneka vanhu vekumba kwangu.” 62 Jesu akati kwaari: “Hapana munhu anoti kana abata gejo otarisa zvinhu zviri shure+ akanyatsokodzera Umambo hwaMwari.”+
^ Kana kuti “neimwe nguo yekuchinja.”